ဟုန်ပေါင်း (အန်ပေါင်း) အကြောင်း ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုလဲ? - For her Myanmar
ဟုန်ပေါင်း (အန်ပေါင်း) အကြောင်း ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုလဲ?
စမီးကိုလည်း ဟုန်ပေါင်း ပေးကြပါ T.T
အနီရောင် စာအိတ်လေးထဲမှာ ပိုက်ဆံလေးထည့်ပြီး ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့ အလေ့အထက တရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့ပါ။ နှစ်သစ်ကူးနေ့တွေ ၊ မင်္ဂလာဆောင် ၊ မွေးနေ့ ၊ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွေမှာ ဟုန်ပေါင်းပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီဓလေ့ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေ ရှိတာပေါ့နော်… ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ နားလည်မှု လွဲချော်တာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်လို့…
ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေထဲကပဲ ဟုန်ပေါင်းတောင်းလို့ ရတယ်ဆိုတာ ဂျင်းထည့်တာပါနော်။ တကယ်တော့ အလုပ်အကိုင်ရှိတဲ့ သူတွေက ငွေမရှာနိုင်သေးတဲ့ ညီ၊ ညီမ ၊ တူ ၊ တူမတွေ ၊ ငွေရှာဖို့ မတတ်နိုင်တော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဟုန်ပေါင်း ပေးလို့ ရပါတယ်နော်… ကိုယ့်လက်အောက်က ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း နှစ်ကူးဟုန်ပေါင်းဆိုပြီး ပေးလို့ ရပါတယ်.. (ကဲ.. ဘာလုပ်နေလဲ.. သွားတောင်းကြတော့လေ 😛 )
ဟုန်ပေါင်းအိတ်က အနီရောင်မဟုတ်ဘဲ အဖြူရောင် ပေးလို့ရလား?
ဟုန်ပေါင်းအိတ်ကို အနီရောင် ပေးရတာက အကြောင်းရင်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒါကို မသိဘဲ အလွယ်တကူ အဖြူရောင် အိတ်နဲ့ ပိုက်ဆံ ပေးလို့ကတော့ အသုဘမှာ ကူငွေထည့်သလို သဘောသက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> တရုတ်နဂါးအက ဘာကြောင့်ကကြတာလဲ ?
ဟုန်ပေါင်းကို ဘယ်လိုလက်ခံယူမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပေးနိုင်မယ့် ပမာဏကိုရော ဘယ်လို တွက်ချက်မှာလဲ?
ဟုန်ပေါင်းကို လက်ခံတဲ့အခါမှာလည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အမြဲယူရပါတယ်။ ဒါက လေးစားမှုကို ပြသရာ ရောက်ပါတယ်။ ဟုန်ပေါင်းပေးမယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ပေးမယ့် ငွေပမာဏကို စာရင်းသေချာတွက်ပြီးမှ ဘယ်သူ့အတွက် ဘယ်လောက် ဆိုတာကို အိတ်နီထဲ ထည့်ပေးရမှာပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘောင်တစ်ခုထဲက တတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏကိုပဲ ပေးသင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ဟုန်ပေါင်း (ခေါ်) အနီရောင်စာအိတ် ဆိုတာ…
ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့သူရှေ့မှာ အိတ်ဖွင့်ဖောက်ပြီး ကြည့်လို့ရလား?
အရေးကြီးတာ တစ်ခုကတော့ ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့သူရှေ့မှာ အိတ်ကို ဖွင့်မကြည့်ရပါဘူး။ အားရပါးရ အိတ်ကို ဖွင့်ဖောက်ပြီး “ဟာ..ဟုန်ပေါင်းကလည်း နည်းနည်းလေး” ဆိုလို့ကတော့ ဘယ်သူက ပေးချင်တော့မလဲနော် 😀 ဒါကြောင့် ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့သူတွေရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ အိတ်ဖွင့်ဖောက်ပြီး မကြည့်ပါနဲ့လို့…
ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့ ပမာဏက ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲ??
ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့ ပမာဏကလည်း စုံကိန်းပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တရုတ်ရိုးရာအရ စုံကိန်းတွေက မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ကံကောင်းခြင်းတွေက အစုံလိုက် လာတတ်တယ်လို့ ယူဆလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၅၀၀၀ ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ ၆၀၀၀ ပေးလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ၄ ဂဏန်း စုံကိန်းတော့ ပေးလို့ မရပါဘူးနော် ယောင်းရေ။ တရုတ်ရိုးရာအရ ၄ ဂဏန်းဟာ သေခြင်းတရား၊ ကံဆိုးခြင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာမို့လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ၈ ဂဏန်းကတော့ ကံကောင်းခြင်းကို ဆောင်ယူလာတဲ့ ဂဏန်းမို့ ၈ပါတဲ့ ဂဏန်းတွေ ပေးရင်တော့ ရပါတယ်တဲ့..
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ချက်ကို ပြောချင်တာကတော့ ဟုန်ပေါင်းကို ကိုယ်ကပဲ အမြဲယူမနေဘဲ ကိုယ့်ဘက်က ပေးနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားရပါမယ်နော်။ ဟုန်ပေါင်းပေးတဲ့ ဓလေ့က အစုန်အဆန် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကချည်းပဲ ယူပါများမယ် ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူးလို့…
ကဲ… ဟုန်ပေါင်းတွေ တောင်းပြီး စိုပြည်နိုင်ကြပါစီကွယ်..
Reference : rojakdaily, elladechina
စမီးကိုလညျး ဟုနျပေါငျး ပေးကွပါ T.T
အနီရောငျ စာအိတျလေးထဲမှာ ပိုကျဆံလေးထညျ့ပွီး ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့ အလအေ့ထက တရုတျလူမြိုးတို့ရဲ့ ဓလပေ့ါ။ နှဈသဈကူးနတှေ့ေ ၊ မင်ျဂလာဆောငျ ၊ မှေးနေ့ ၊ နှဈပတျလညျ အခမျးအနားတှမှော ဟုနျပေါငျးပေးလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒီဓလရေဲ့ နောကျကှယျမှာတော့ လိုကျနာရမယျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးလေးတှေ ရှိတာပေါ့နျော… ဒီစညျးမဉျြးတှကေို မလိုကျနာဘူးဆိုရငျတော့ နားလညျမှု လှဲခြျောတာတှေ ရှိနိုငျပါတယျလို့…
ပွီးတော့ အိမျထောငျရှိသူတှထေဲကပဲ ဟုနျပေါငျးတောငျးလို့ ရတယျဆိုတာ ဂငျြးထညျ့တာပါနျော။ တကယျတော့ အလုပျအကိုငျရှိတဲ့ သူတှကေ ငှမေရှာနိုငျသေးတဲ့ ညီ၊ ညီမ ၊ တူ ၊ တူမတှေ ၊ ငှရှောဖို့ မတတျနိုငျတော့တဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှကေို ဟုနျပေါငျး ပေးလို့ ရပါတယျနျော… ကိုယျ့လကျအောကျက ဝနျထမျးတှကေိုလညျး နှဈကူးဟုနျပေါငျးဆိုပွီး ပေးလို့ ရပါတယျ.. (ကဲ.. ဘာလုပျနလေဲ.. သှားတောငျးကွတော့လေ 😛 )
ဟုနျပေါငျးအိတျက အနီရောငျမဟုတျဘဲ အဖွူရောငျ ပေးလို့ရလား?
ဟုနျပေါငျးအိတျကို အနီရောငျ ပေးရတာက အကွောငျးရငျး ရှိပါတယျ။ တကယျလို့ ဒါကို မသိဘဲ အလှယျတကူ အဖွူရောငျ အိတျနဲ့ ပိုကျဆံ ပေးလို့ကတော့ အသုဘမှာ ကူငှထေညျ့သလို သဘောသကျရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> တရုတျနဂါးအက ဘာကွောငျ့ကကွတာလဲ ?
ဟုနျပေါငျးကို ဘယျလိုလကျခံယူမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပေးနိုငျမယျ့ ပမာဏကိုရော ဘယျလို တှကျခကျြမှာလဲ?
ဟုနျပေါငျးကို လကျခံတဲ့အခါမှာလညျး လကျနှဈဖကျနဲ့ အမွဲယူရပါတယျ။ ဒါက လေးစားမှုကို ပွသရာ ရောကျပါတယျ။ ဟုနျပေါငျးပေးမယျလို့ စဉျးစားတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျပေးမယျ့ ငှပေမာဏကို စာရငျးသခြောတှကျပွီးမှ ဘယျသူ့အတှကျ ဘယျလောကျ ဆိုတာကို အိတျနီထဲ ထညျ့ပေးရမှာပါ။ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ ဘောငျတဈခုထဲက တတျနိုငျတဲ့ ပမာဏကိုပဲ ပေးသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ဟုနျပေါငျး (ချေါ) အနီရောငျစာအိတျ ဆိုတာ…
ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့သူရှမှေ့ာ အိတျဖှငျ့ဖောကျပွီး ကွညျ့လို့ရလား?
အရေးကွီးတာ တဈခုကတော့ ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့သူရှမှေ့ာ အိတျကို ဖှငျ့မကွညျ့ရပါဘူး။ အားရပါးရ အိတျကို ဖှငျ့ဖောကျပွီး “ဟာ..ဟုနျပေါငျးကလညျး နညျးနညျးလေး” ဆိုလို့ကတော့ ဘယျသူက ပေးခငျြတော့မလဲနျော 😀 ဒါကွောငျ့ ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့သူတှရှေမှေ့ာ ဘယျတော့မှ အိတျဖှငျ့ဖောကျပွီး မကွညျ့ပါနဲ့လို့…
ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့ ပမာဏက ဘယျလောကျဖွဈရမလဲ??
ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့ ပမာဏကလညျး စုံကိနျးပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ တရုတျရိုးရာအရ စုံကိနျးတှကေ မင်ျဂလာရှိတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ကံကောငျးခွငျးတှကေ အစုံလိုကျ လာတတျတယျလို့ ယူဆလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၅၀၀၀ ပေးမယျလို့ စဉျးစားထားတယျဆိုရငျတော့ ၆၀၀၀ ပေးလိုကျပါ။ ဒါပမေဲ့ ၄ ဂဏနျး စုံကိနျးတော့ ပေးလို့ မရပါဘူးနျော ယောငျးရေ။ တရုတျရိုးရာအရ ၄ ဂဏနျးဟာ သခွေငျးတရား၊ ကံဆိုးခွငျးတှနေဲ့ ဆကျစပျနတောမို့လို့ ဆိုကွပါတယျ။ ၈ ဂဏနျးကတော့ ကံကောငျးခွငျးကို ဆောငျယူလာတဲ့ ဂဏနျးမို့ ၈ပါတဲ့ ဂဏနျးတှေ ပေးရငျတော့ ရပါတယျတဲ့..
နောကျဆုံးအနနေဲ့ အရေးအကွီးဆုံး တဈခကျြကို ပွောခငျြတာကတော့ ဟုနျပေါငျးကို ကိုယျကပဲ အမွဲယူမနဘေဲ ကိုယျ့ဘကျက ပေးနိုငျအောငျလညျး ကွိုးစားရပါမယျနျော။ ဟုနျပေါငျးပေးတဲ့ ဓလကေ့ အစုနျအဆနျ ရှိပါတယျ။ ကိုယျကခညျြးပဲ ယူပါမြားမယျ ဆိုရငျတော့ မကောငျးပါဘူးလို့…
ကဲ… ဟုနျပေါငျးတှေ တောငျးပွီး စိုပွညျနိုငျကွပါစီကှယျ..
Tags: china, Give, Hongbao, rules, Tradition
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း -၁၀)
ပါကစ္စတန်ရဲ့ သံမဏိအမျိုးသမီး ဘနာဇီယာဘူတို
Ei Mon February 5, 2019
ရုံးမှာ ဖုန်းအသုံးပြုဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ထားသင့်တဲ့ စည်းကမ်း(၇)ခု
Phyu Thant April 23, 2019
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း -၁၀)
Moe February 4, 2019
အရိုးကွဲအောင်ရိုက်မှ အသည်းစွဲအောင် ချစ်တယ်တဲ့လား?
Sugar Cane January 18, 2019
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကလေးသတို့သမီးများ
Sugar Cane January 8, 2019
သူဌေးကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
Ei Mon January 8, 2019